Friday June 18, 2021 - 09:18:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada melleteriga dowladda Kenya ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya ayaa wajahaya hoos udhac dhaqaale midkii ugu xooganaa kadib markii reergalbeedku ay hoos udhigeen lacagihii ay ku maalgelin jireen.
Ururka Midowga Yurub oo bixiya inta badan qarashka ku baxa ciidamada AMISOM ayaa ku dhawaaqay in wax ka badan kala bar ay jareen lacagihii ay siin jireen melleteriga Kenya.
Warbixin rasmi ah oo soo baxday ayaa lagu sheegay in ururka EU uu hoos udhigay 66% lacagtii uu ciidanka Kenya kusiin jiray ladagaallanka Al Shabaab taas oo ka dhigan in KDF ay weyn doonto wax ka badan 4,9 Bilyan oo lacagta shilinka ah.
Qiima dhimista ayaa bilaabanaysa bisha Julaay ee soo socota maadaama uu soo dhawaaday waqtiga ay ciidamada AMISOM uga baxaan dalka Soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa askari walba oo katirsan ciidanka Kenya ee Soomaaliya ku sugan bishii mushaar ugu diri jiray lacag dhan 1028 dollar halka xukuumadddu ay ka jaran jirtay 200 oo dollar taas oo ka dhigan in askari walba uu dalkiisa kula laabanayay 800 oo dollarka Mareykanka ah.
Xafiiska Q.Midoobay ee Soomaaliya ayaa war kooban oo uu soo saaray ku sheegay in uu bixin doono qarashka taakulaynta ah ee ay ubaahanyihiin ciidamada AMISOM marka ay howlgallada sameynayaan taas oo loo fasirtay in 'Beesha caalamka' aysan awoodin sii wadidda maalgelinta ciidamada Afrikaanta ah ee Soomaaliya ku sugan.
Sanaddii 2011 ayuu meleteriga Kenya si toos ah ugusoo biiray duullaanka Soomaaliya balse ciidamadan ayaa weeraro laayaan ah kala kulmay Shabaabul Mujaahidiin.
Kenyaa dhabarka uridatay khasaarihii ugu badnaa ee mar qura ciidamada shisheeye kasoo gaara weerarada Jihaadiyiinta, sanaddii 2016 weerar ka dhacay Ceel Cadde ayaa lagu dilay ku dhowaad 200 oo askari iyadoona askar kale lagu qafaashay.
Nin loo haystay in uu khaarijin rabay madaxweynaha Maali oo dhintay.